Izindlela ezi-5 zokwenza wonke umuntu akuzonde - Psychology 2022
Izindlela ezi-5 zokwenza wonke umuntu akuzonde
Izithombe eziningi kakhulu ezinkundleni zokuxhumana
Umkhuba wokujikijela amagama
Ukuqhosha kufihlwe njengokuphansi
Ukwenqaba ukukhombisa imizwa
Wonke umuntu ufuna ukuthandwa. Ngakho-ke, udinga ukulahla imikhuba ethile, ngenxa yokuthi ufinyelela umphumela ophambene - inzondo kwabanye.
Uma uthumela izithombe ezingu-10 nsuku zonke, kungase kuhlukanise abantu. Uma lezi kuyizithombe zomndeni wakho, ngakho-ke eziningi zazo zizohlukanisa abangani bakho. Uma lezi kuyizithombe zabangane, izihlobo zizozizwa zihlukanisiwe. Noma ngabe umuntu angathini, ezinye izithombe zidinga ukugcinwa ezinqolobaneni zasekhaya futhi zingaboniswa muntu.
Kolunye ucwaningo, abacwaningi bacela ababambiqhaza ukuthi baqhube izincwadi zebhizinisi futhi, noma nini lapho kungenzeka, bagqamise ukujwayelana kwabo nomdlali wethenisi odumile uRoger Federer. Lapho abantu bekwenza kaningi lokhu, kwaba yilapho bengathandwa ozakwabo. Laba babika ukuthi babheka izincwadi ezinjalo njengeziwubuqili.
Lapho abantu bebonisa amaphuzu abo okuba sengozini, kuyasiza ukuvala nokwethemba ukuxhumana. Uma begcizelela ngamabomu "ukushiyeka" kwabo ukuze bagcwalise ukubaluleka kwabo, ngokushesha kudonsa amehlo. Isibonelo, uma ufaka isicelo somsebenzi, abantu bavame ukusho into efana nokuthi, "Ngisebenza kakhulu" noma "Ngikhathazeke kakhulu ngezinto ezincane." Eqinisweni, lokhu kuziphatha kunciphisa kuphela amathuba okuthola isikhundla esifiselekayo.
Ososayensi bake benza ucwaningo olunjalo. Okokuqala, abafundi bakhonjiswe ifilimu emfushane lapho umlingisi ezwakalise khona imizwelo emincane phakathi nesenzo. Khona-ke - konke okufanayo, kuphela manje umlingisi wabonisa iphalethi ebanzi engokomzwelo ebusweni bakhe. Abafundi balinganise ukuzwela kwabo okwesibili okuphezulu kakhulu.
Ucwaningo oluningi lubonise ukuthi abantu banozwelo olukhulu kubantu abamamathekayo. Futhi uma umuntu emomotheka phakathi nomhlangano wokuqala nawe, cishe uzomkhumbula ngokuqinisekile, okungenzeka kungenzeki uma ebukeka edangele futhi engajabule.
Ingabe uqinisekile ukuthi awuyena umuntu we-shopaholic? Izimpawu namaqiniso angalindelekile
Owesifazane nemfashini: Izindlela ezingu-5 eziphezulu zokugqoka izingubo zezemidlalo nsuku zonke
Ingabe inzalo ingelapheka? Izindlela zokwelapha
Ngokwezibalo, i-20% yemibhangqwana yase-Ukraine yeminyaka yokuzala ihlangabezana nobunzima ekukhulelweni ingane ngokwemvelo. Kodwa-ke, imithi yesimanje inobuchwepheshe obuningi bokuzala obusiza ukuxazulula izinkinga eziyinkimbinkimbi kakhulu